Amabhodi wamama we-Z390 ahamba phambili weGaming - 2020 (Izibuyekezo) - Uhlu
Amabhodi womama we-Z390 athathe umhlaba ngesiphepho ngokusebenza okuhle kakhulu. Bakhule baba ngamabhodi womama ahlonishwa kakhulu asekela isizukulwane sakamuva sabaprosesa. Ukwethulwa kwe-Intel ye-z390 chipset kungekudala kwasabalala njengomlilo wequbula, futhi abakhiqizi bezinga eliphezulu banquma ukubamba iqhaza kulo mjaho.
Ngisho namagama amakhulu afana neMSI, Asus, kanye neGigabyte akhethe ukukulethela izinketho ze-premium. Kodwa-ke, lokhu kwaholela ebangeni elixakayo lokukhetha. Namuhla, unamabhodi we-z390 amaningi kakhulu emakethe, futhi kungasabisa ngokulinganayo ukubheka okuhle kunakho konke
Kodwa-ke, lawa ma-motherboards amahle kakhulu we-Z390ukubuyekeza kukulethela ukukhethwa okuphezulu kuwo wonke amagumbi omhlaba. Akudingeki ubheke noma yikuphi njengoba lokhu kubuyekezwa kuzokunikeza imininingwane emfushane maqondana ne-motherboard ngayinye. Ngokwengeziwe, kukhona umhlahlandlela womthengi, neminye imibuzo evame ukubuzwa ukukusiza wenze isinqumo unolwazi.
Ibhokisi le-Android TV elihamba phambili - Umhlahlandlela Wokuthenga
Ake sinciphise ukujaha bese siqala ngo:
Amabhodi wamama we-Z390 ahamba phambili (2020) ngokubuyekezwa:
1. I-MSI Z390-A Pro
Ngaphezulu phezulu kohlu, unenketho ephoqelelayo evela kwiMSI njengoba lena isekela i-8 yakamuvathfuthi 9thamaprosesa wokukhiqiza avela ku-Intel. Uthola ukuhambisana nePentium Gold neCeleron ngezinhlobo ezahlukahlukene zokukhetha kweprosesa. Yi-DDR4, eyenza ijwayelekile ngejubane le-Z390 nokusebenza.
Uthola inkumbulo yokwesekwa ngokweqile kuze kufike ku-4.4 Gigahertz, okwenza kube ukukhetha okuhle kakhulu. Iza nazo zonke izimbobo zakamuva ze-USB nokuxhaswa kweGen2. I-heatsink enwetshiwe iyisengezo esifanelekile sokunikeza ukushabalalisa okungcono kokushisa kwebhodi lomama.
Inokukhulisa okuyisisekelo kwesiginesha ye-MSI ukuqinisekisa ukudluliswa okuhle kwiyunithi yokucubungula. I-Turbo M.2 iqinisekisa ukufika kuma-32 Gbps wokudluliswa kwedatha ku-SSD. Ukuthatha isiginesha ye-MSI, ine-HD namamojula womsindo ahlukanisiwe wokunikeza ikhwalithi engenakuphikiswa ngokuxhaswa kwesiteshi okufika ku-8.
Kodwa-ke, akuyona i-'best-in-class 'ngokunembile ngoba iyizinga lokungena iZ390 elinokuhlanganiswa okujwayelekile. Ngakho-ke, kuyisinqumo esikahle kwisabelomali futhi esanele ngokwanele kulabo abafuna ukuhlola i-motherboard yeZ390.
Ikhwalithi yokwakha yeMSI
I-BIOS esebenziseka kalula
Ilungele abathandi abedlula ngokweqile
Kuze kube yimanje abashayeli
Ukusekelwa kwesoftware okumangazayo
Akuyona inketho efanelekile yokuqala. Kudinga ukuthi ube nolwazi lokusetha
Ibhukwana lomsebenzisi alicaci
2.I-MSI MPG Z390 Gaming Edge
Uma ubulithanda ibhodi lomama langaphambilini kepha wafuna ukuthuthuka nokunye okuningi 'kwesiginesha yeMSI,' khona-ke lena izolifanelekela leli bhili. Le bhodi yomama iza nakho konke okwedlule, njenge-8thuhlobo 9thgen processor ukwesekwa, kanye nechweba lakamuva lokuthunyelwa okugcwele amandla.
Kodwa-ke, ithola izimbobo ezimbili ze-M.2 namachweba amaningi we-USB 3.1 Gen2 ukufeza izidingo zakho zokuxhuma. Vele, kungaba yini i-motherboard ngaphandle kwama-aesthetics we-MSI? Lapha unezibani eziyimfihlakalo ezisayinwe ngezilawuli ze-RGB ukuqinisekisa isipiliyoni esenziwe ngokwezifiso ngokuphelele.
Ngaphezu kwalokho, amamojula wokuxhuma we-Bluetooth ne-wifi akulethela isivinini sokuxhuma namandla. Kukhona ukuthuthukiswa kumamojula womsindo angawodwa ukuletha ikhwalithi ephezulu yokusebenza komsindo. I-heatsink enwetshiwe nezixhumi zensimbi ezivikelekile zikulethela ukuqina ngokusebenza.
Ungangeza kalula ama-GPU amaningi, uthole amandla aphawulekayo kusuka ekukhuliseni inkumbulo, nangaphezulu. Inokwakhiwa okuqinile kakhulu ne-BIOS enobungani kakhulu. Uma ungumuntu othanda ngokweqile, lena ngeke ikudumaze. Ngenkathi ibhodi yomama elinikezwe ngenhla lingahle lingalingani okuthandwa yiwo wonke umuntu, lena iyanelisa zonke izidingo zakho ze-Z390.
Ukukhetha okukhulu kwezingxenye, ama-RAM, kanye nama-processor okwenza ngokwezifiso
I-LAN eyakhelwe ngaphakathi ne-BlueTooth isebenza ngaphandle kwebhokisi
Ihlangabezana nokulindelwa kokusebenza kwamabhodi womama we-Z390
Ukwakhiwa okusindayo futhi okubanzi kwebhodi yama-Z390
Kubonakala kugcina ukushisa okuphezulu kunamanye ama-motherboard
3. IGIGABYTE Z390 UD
I-GIGABYTE iyikhahlela ngenothi ngokungeza okuhle kumabhodi womama we-Z390. Lapha unokuhlanganiswa okulinganiselayo kokusebenza, isivinini, ukushisa, nenani kukhetho olulodwa. Kuza nokusekelwa kwe-8 yakamuvathnamaprosesa we-9gen, kufaka phakathi i3 kuya ku-i9, iCeleron, nePentium. Imiklamo eyingqayizivele ye-VRM iyenza ikwazi ukuxhasa ama-processor ayisishiyagalombili.
Ngesihloko sephini esingu-8 + 4, uthola uhla oluphelele lokulungiselelwa kwe-PC yakho njenganoma iyiphi enye. Okubaluleke nakakhulu, iza nezilawuli ze-Smart Fan 5 nokuhambisana ukuhlangabezana nezidingo zokupholisa. Ngakho-ke, ungayigcina ingenamthungo kubhodi yomama ukuletha ukusebenza okuphezulu ngokungaguquguquki.
Izikhonkwane zendabuko zithathelwa indawo izikhonkwane eziqinile ukuqinisekisa ukuqina kokulungiselelwa komsebenzisi. Akudingeki ukhathazeke ngokulimaza ngokomzimba i-motherboard. Kuyizikhali eziqinile ezingapheli eziqinisekisa lokho. I-wifi iza nokuxhaswa kwe-LAN, futhi ngamasinki we-M.2, une-CPU enolwazi.
Vele, le bhodi yomama ithatha igalelo kuma-aesthetics ohla lwezingxenye ukuqinisekisa ukusebenza. Awukwazi ukulindela okuningi ngokuya ngezikhalazo ezibonakalayo zemodeli. Uma ungenandaba nalokho, lokhu kungukukhetha okuhle nganoma iyiphi indlela oyibuka ngayo.
Kulula ukusebenzisa futhi ukukhetha okusebenziseka kalula
Ukwakha okuhlala njalo ngezikhonkwane eziqinile ukumelana nomonakalo
Ukusetha okuqondile nokusebenza kwebhodi lomama le-Z390
I-BIOS ayisebenziseki kalula futhi kungathatha isikhathi ukujwayela
Ayikho i-wifi eyakhelwe ngaphakathi noma imbobo yokubonisa yokunye ukuxhumana
4. IGIGABYTE Z390 AORUS PRO Wi-FI
Nakulokhu futhi, uthola enye inguqulo ethuthukisiwe yenketho yangaphambilini ohlwini. Le iza nomklamo we-12 + 2 VRM esikhundleni se-10 + 2 ejwayelekile. Iqinisekisa ukuhambisana kwendawo yonke nokusebenza okungenaphutha kusuka kuma-processor, njengoba ungavuna kuze kufike ku-5 GHz wokusebenza uma uthola ukucaciswa kahle.
Le iza ne-wifi eyakhelwe ngaphakathi cishe ne-2 Gbps yesisindo sejubane ukufeza noma iyiphi imfuneko yokuxhuma. Kuza nokusekelwa okujwayelekile kwabalandeli be-Smart 5 ngokufakwa okusha kwama-RGB LED. Kulungile! Uthola ukuhlanganiswa kokudala kwamalambu e-LED asebenza kahle kakhulu ngohlelo lwe-motherboard's monochrome scheme.
Inabaqaphi ababili be-M.2 abashisayo futhi isekela isiteshi esimbili sememori ye-DDR4. Uma uhlanganisa zonke izici, ukwenza ngezifiso, ukuhanjiswa, nokusekelwa kwamandla, le bhodi yomama ngokungangabazeki ilungele ukubanjwa ngamanani ayo ancintisana kakhulu.
Ibhodi lomama elinomthwalo onzima
Izingxenye ze-Premium-grade zokuhlinzekwa ngamandla kagesi
Iningi lamachweba e-USB namanye amachweba ukufanisa izidingo zokuxhuma
Izinzwa eziningi zokushisa zokuqapha okuphelele kokushisa
I-BIOS ayinembile futhi ithatha isikhathi ukujwayela
Ayinayo i-LED yokulungisa iphutha noma i-CMOS yamandla
5.I-ASUS Prime Z390-Ibhodi Yomama
Uma amavidiyo nemidwebo kuyizidingo zakho, yini engafana ne-ASUS futhi iyi-Prime Z390 ohlwini? Lo msebenzi wobuciko omuhle kakhulu ukulethela konke okunganikezwa i-Z390. Uthola ukuxhumeka okusheshayo nge-PCI 3.0 Express ne-bandwidth engu-2.0. I-M.2 esekela kufika ku-32 Gbps yejubane ihlanganisa okuhle kakhulu ekilasini i-USB 3.1 nohlobo C ukuze isebenziseke kalula.
Idizayini ye-Optimem II enokwakheka okupholile yenza ikwazi ukumelana nokushisa okukhulu njengoba ilawula izinga lokushisa kahle. Ngakho-ke, ungaba ne-overuls ethuthukisiwe, edlula noma yiliphi i-motherboard yangaphambilini. Vele, ungakukhohlwa kanjani ukusayina ukwenziwa kwezindlela ezinhlanu u-Asus aziwa ngakho.
I-suite ye-AI optimization iqinisekisa ukulawula okuhlakaniphile kokusebenza ngokweqile, ukulawula ukushisa, nokusebenza okuzenzakalelayo. I-Asus Prime Z390 iqhubeka ikulethela ukusebenza komsindo osezingeni eliphezulu ngokubambisana neRealTek yamamojula womsindo. Akukona konke lokho! Uthola ukubonakala okuhle kanye nomklamo wobuhle wesikhalazo sesimanje ngamalambu e-LED.
Izinga eliphakathi maphakathi no-Z390
Ukukhetha okuhle kakhulu kokuhlelwa kwevidiyo nokusebenza kokuqamba imidwebo
Inani eliphakeme lemali
Kugcwele izici eziphoqayo
I-BIOS namaDrayivu adinga ukubuyekeza okwenziwa ngesandla
Ukuvuselelwa kungenza kube nzima ukusebenzisa i-BIOS namaDrayivu
6. I-ASUS Prime Z390-P
Ungahle uzibuze ukuthi kungani kukhona enye i-Asus Prime? Yebo, lena yenzelwe abasebenzisi abasezingeni eliphezulu ekutshalweni kwezinga lokungena. Lokhu kuyisinqumo esihle kakhulu sabakhi be-PC abathanda ukwenza ngokwezifiso iyunithi yabo. Noma ngabe usaqala noma ungumakhi wohlelo oluphakathi, lokhu kuyinketho ehambisana kakhulu.
Njengokwakheka kwangaphambilini, uthola izinketho zokuxhuma nge-ultra-fast kanye nezithuthukisi zememori ezimangazayo ezinikezela ngokweqile okungcono kakhulu. Uthola ukudluliswa kwedatha okungenakulinganiswa kanye nedizayini eguquguquka kalula okuyisiginesha ye-Asus. Okubonwayo nobuhle kutholakale i-tweak lapha ngokusebenza okuphawulekayo.
Kodwa-ke, njengoba isetshenziselwa isabelomali, kuthatha ukushaya kancane kwinani lamachweba eminyangweni ehlukene. Iningi lazo lisezingeni lesine. Kuyibhodi yomama ye-ATX ezinokuhlanganiswa okuzinzile kwezikulufo eziyisithupha, okungenzeka kungatatazelisi abanye abasebenzisi. Sekukonke, kuyinani eliphakeme lemali.
Inani eliphakeme lemali nokusebenza okuphezulu
Yenza ngokwezifiso ngokuphelele abasebenzisi
Inketho enhle kakhulu yabakhi be-PC
Ihlangabezana nezidingo zemidlalo nehluzo
Usekela i-8thfuthi 9thama-gen processors, kufaka phakathi ama-i-processor
Izakhi zokwakha zithatha ukunyuka okuncane ngokuhlanganiswa kwepulasitiki
Kunamachweba alinganiselwe nokuxhuma okungavimbela ukwakhiwa okugcwele
7. I-ASRock Motherboard Z390
Uma ufuna izinketho eziningi zesabelomali kunama-premium brand, i-ASRock inokukhetha okuhle kakhulu kwamabhodi womama. Lokhu kunokufaka okuyisisekelo cishe ngazo zonke izici zebhodi lomama elijwayelekile le-Z390. Uthola ukuxhumana okufanayo, ukweqisa ngokweqile, nokuthi yini. Kodwa-ke, ungathola izinzuzo ezigcwele i-Z390 ephezulu engakunikeza yona.
Ngokungafani namabhodi womama amaningi, kunesici esisodwa esishayo. Inokusekelwa kwememori ephindwe kabili efinyelela kuma-64 GB, futhi lokho kuyenza ivelele. Inokusebenza okulinganiselayo futhi inezinketho zokupholisa ezinomkhawulo. Uma ufuna ukujabulela ukuthuthuka kwe-Z390 ngaphandle kokucatshangelwa okuningi kokudlala nemidwebo, lo uzokwenza umsebenzi wenziwe.
Vele, uma unezidingo ezingajwayelekile zokudlala nezokudlala, ngeke zikudumaze. Sekukonke, kungenxa yalabo basebenzisi be-PC abathanda ukuhlala besesikhathini kodwa abangenayo ukusetshenziswa kwe-PC njalo. Ngokuhambisanayo, uma uchwepheshe osebenzayo, kungukukhetha okungabizi.
Ukukhetha okuhle kwezinga lokungena
I-64 Gbps yokusekelwa kwememori
Kulungele isabelomali nenani lemali
Kuhle kakhulu kubasebenzisi be-PC ngezikhathi ezithile
Kungagcinwa ngezidingo zobungcweti
Ayinikezi izinzuzo ezigcwele zebhodi lomama le-Z390
Ifanele izidingo ezithile zemidlalo nezehluzo ngezikhathi ezithile
8. I-EVGA Z390 Emnyama
Cishe wonke amabhodi womama anikezwe ngenhla angena ezingeni eliphakathi namanye amathuba aphezulu. Noma kunjalo, lena ibhodi lomama le-Z390 elihamba phambili ngempela ohlwini. Ikulethela izici ezigcwele nokusebenza okuphezulu. Uma ufuna ngempela ukuzwa i-Z390 enkazimulweni yayo, kufanele uyithole le.
Ngakwesokunene se-bat, unesixhumi samandla samaphini angama-24 esine-pin engu-8 yamandla we-CPU. Uthola i-4.6Ghz emangalisayo yokweqa ngokweqile ngememori yesiteshi esine-2DIMM. Kunezimbobo eziningi zohlobo A, zohlobo C, nezimbobo ezizungeze i-7 USB 3.1 Gen 2 Ports ukuhlangabezana nezidingo zesimanjemanje zokuxhuma.
Ungahlanganisa kuze kube yi-SATA eyisithupha. Kukhona i-2 M.2 nokusekelwa kwememori kuze kufike ku-32 GBSP. Kukhona i-Bluetooth eyakhelwe ngaphakathi, i-wifi, nokusekelwa komsindo okungenakuqhathaniswa. Inama-LEDs kanye nesiphetho se-matte esihle esisebenza kahle ngokumangazayo ngamalambu nalokho okungekho. Uthola ukusekelwa okugcwele kuma-LED, izibonisi, namanye ama-setups wokuqapha ukuthola izibalo ze-CPU eziphelele.
Iza nezigaba eziyi-17 zokuhambisana kwememori ye-VRM yedijithali ne-Intel Optane. Uthola futhi isiteshi esingu-5.1 umsindo we-HD audio + i-EVGA NU Audio. Kukhona i-wifi-band wifi yakamuva ne-Bluetooth 5.0 yakamuva, futhi uthola okuqukethwe okwenziwe ngegolide okuyisokhethi ngezikhala ze-PCIe eziqinisiwe. Kunezinketho ezithile ezingaphumeleli, njengenkinobho ye-SafeBoot yokuqinisekisa ukusetha kabusha kokugcina okwaziwayo.
Ukukubeka ngamafuphi, ikulethela cishe yonke into i-motherboard ye-Z390 engakunikeza ngokuhambisana okugcwele. Vele, kuyabiza ngokulinganayo, futhi.
Qedela ukuxhumeka nobubanzi bezici
Yenza ngezifiso kakhulu
Kugcwalisa izidingo zokuqapha
Ama-LED wesikhalazo sobuhle, nemodeli ebushelelezi
Imodeli ye-Z390 ehamba phambili kakhulu
Izindleko zingaphezulu kakhulu kwamanye amabhodi we-Z390
Kungahle kuthathe isistimu ohlelweni uma uyidedela ingamandla aphelele
Umhlahlandlela Wabathengi we-Best Z390 Motherboard:
Vele, imakethe iguquka njalo, futhi kuzoba nesikhathi lapho i-Z390 izoba ubuchwepheshe basendulo. Uma ucabanga ukuyithenga, ungalindela ukuthi ihlale cishe iminyaka emihlanu ngaphambi kokuba iphelelwe yisikhathi.
Kukhona izinketho eziningi ezingcono, kepha zibiza ngokulinganayo ngaphezulu. Ngakho-ke, uma ucabangela i-motherboard yeZ390, kungakuhle ukugcina la maphuzu alandelayo engqondweni:
1. Yakha-Ready Ukukhetha
Isici esibaluleke kakhulu sebhodi lomama le-Z390 ukwenziwa ngokwezifiso okusebenziseka kalula. Ngakho-ke, kufanele uqinisekise ukuthi uyazi ukuthi wenzani nge-PC. Awukwazi ukulindela ukuthi abanye ochwepheshe bakusize ngomsebenzi. Kuyisinqumo esihle kakhulu kulabo abafunda ukwakha noma abafuna ukutshala imali ku-CPU yabo kancane kancane.
2. Cabanga ngokweqa ngokweqile kanye neMemori
Kufanele ucabangele ukusekelwa kwememori nemikhawulo yokweqa ngokweqile uma ufuna i-motherboard yeZ390 ihlale isikhathi eside. Akufanele yehlise kulezi zici, noma uzophela ngebhodi lomama eliphelelwe yisikhathi elizokwenza umsebenzi wenziwe.
3. Ukusebenza okupholile
Ukusekelwa kwabalandeli kubalulekile. Amanye amabhodi womama asekela abalandeli ababili ngokusemandleni. Udinga okungenani abalandeli abathathu kuya kwabahlanu ukuze ugcine ukushisa okukhulu, ikakhulukazi imisebenzi enzima yokusebenza. Ngokufanayo, ukweqa ngokweqile kuzothatha imali.
4. Izinketho zokuxhumana
Awukwazi ukuyekethisa ngokutholakala kwe-USB njengoba sekuyimfuneko ebaluleke kakhulu uma ufuna ukuxhuma amadivayisi amaningi. Noma ngabe unesistimu yomsindo, amakhibhodi, isilawuli sokudlala, noma okunye, i-USB ibalulekile. Ngokufanayo, i-SSD noma i-SATA ibalulekile, futhi.
Ungakushayi indiva ukuxhumana kwe-wifi ne-Bluetooth eminyakeni yanamuhla edijithali edinga ukuthi ube nokuxhumeka kwakamuva kokusebenza kahle kwejubane.
5. Izici zomzimba
Ama-CPUs wanamuhla adinga ukuthi ube nokwakhiwa okuhlanganisiwe nokwakhiwa okuhle. Awukwazi ukungazinaki lezi zici, ikakhulukazi uma ufuna okuthile okuhlangana nezidingo zokuhlobisa zamanje. Kungenzeka ungayinaki i-LED nezinye izinto zobuhle uma unekhabethe elimboze i-motherboard yakho.
Ukuvikelwa okufanele nezinto ezisezingeni eliphakeme kubaluleke kakhulu kubhodi yomama ehlala isikhathi eside. Ngenxa yokuthi ubophezelekile ukuthola izinhlelo zokusebenza, amageyimu, nezinkundla ezidinga ukusebenza okuphezulu, awukwazi ukubeka engcupheni ukushisa ngokweqile noma ukulayisha ngokweqile izinto ezishibhile.
Iningi lamabhodi womama we-Z390 lizoba ukukhetha okulungele isabelomali ukusetshenziswa kobuchwepheshe nobomuntu siqu. Lokhu kuhle ngamayunithi we-PC asekhaya lapho ungazitika khona ngokudlala ngezikhathi ezithile. Uma ufuna ukujabulela imidlalo kusuka ngo-2015 kuya ku-2020, izokunikeza ukusebenza okuhle kakhulu.
Ngaphandle kwalokho, kusebenza kahle kubahleli behluzo namavidiyo. Kukonke, lokhu kuyisinqumo esifanele sokwenza okujwayelekile. Lokhu kuhle ngokusebenzisa i-9thpro kusuka ku-Intel.
Umbuzo Ovame ​​Ukubuzwa:
1Q. Ingabe i-Z390 Kufanele Ithengwe?
Iminyaka:Uma ukwazi ukuphatha isabelomali futhi utshale imali ephezulu engu-Z390, ngokungangabazeki kufanelekile ukutshalwa kwemali. I-Z390 iza nezici eziningi ze-premium-grade nezinto ongazitholi kalula kwamanye ama-motherboards. Yethulwe eduze ne-2020, ngakho-ke ungalindela ukuthi izokweseka abaningi
2Q. Ingabe i-Z390 Motherboard future-Proof?
Iminyaka:Uma utshala imali kubhodi yomama eyi-Z390, ingahlala isikhathi esiyiminyaka emihlanu ngaphandle kokuncipha kokusebenza. Kuzohambisana nezidingo eziningi zokusebenza. Kodwa-ke, ngeke ifane nezengezo zakamuva kuhlu nama-specs aphezulu kanye nokulungiswa.
3Q. Ingabe i-Z390 iyi-Motherboard Yemidlalo Ehle Yokudlala?
Iminyaka:Ibhodi lomama le-Z390 liza nokuhlukahluka kwezici, kufaka phakathi ukweqisa ngokweqile, ukwesekwa kwabalandeli, kanye nezinketho eziningi zokuxhuma okuyinketho enolwazi olunzulu lwabadlali be-PC. Ngeke uthole umehluko omkhulu, futhi uma wazi ukuthi ungayenza ngendlela oyifisayo kahle, ingadlula ama-PC amaningi wokudlala aphezulu noma uwafanise.
4Q. Ngubani okufanele acabangele i-Z390?
Iminyaka:Uma ungumsebenzisi othembekile we-Intel othemba le processor kuphela, i-Z390 iyisinqumo esihle. Kukhona ama-AMD Ryzen namanye ama-processor emakethe. Kodwa-ke, abanye abantu bayanqikaza ukubazama njengoba benezidingo ezingaphezu kwezokudlala. Kubo, i-Z390 ingcono kakhulu ekilasini ekusetshenzisweni kobungcweti nangokomuntu siqu njengoba ungasebenzisa i-8thfuthi 9thAmaprosesa we-gen Intel kahle.
Qiniseka njalo ukuthi ubheka ezinye izinto nezidingo zokutshala imali ngaphambi kokuthenga i-motherboard. Uhlu lugcina abasebenzisi bezinga lokungena, abaphakathi, kanye nabasebenzisi abasezingeni eliphakeme abacatshangelwayo ngenkathi bekungenisa kufayela le-amabhodi womama amahle kakhulu we-Z390.Ngethemba ukuthi ngakunye kwalokhu kufakazelwa njengokungeziwe okubalulekile. Uma unokudideka okuthile, mhlawumbe umhlahlandlela womthengi nama-FAQs azokusiza ekuqondeni kangcono lawa mabhodi womama.
Lolu hlu lunezinketho ezikusiza ukuthi uhlale usesikhathini futhi unciphise kusuka kwezinye izinketho ezingenakubalwa. Uthola amazinga asebenza kahle kakhulu. Ngakho-ke, thola izinketho ezinhle kakhulu kusuka kumikhiqizo ephezulu ukuya kumikhiqizo engaziwa kakhulu, ngisho nalabo abenza umsebenzi wenziwe.
INGABE ASAP ROCKY UNAZO IZINGANE? Ukuphila Komndeni ka-Rapper Kuqhume ngemva kokumenyezelwa kokuqomisana kuka-Rihanna
Inselelo ye-Broomstick ku-Tiktok: Iyini?